UTAYLOR SWIFT KUNYE NEWAYINI KUNYE NABAHLOBO KWIZANDLA KUMBULELO! - UMCULO
Ndiyathemba ukuba ubenombulelo omnandi nozolileyo nosapho lwakho. I-celebs yaseHollywood ayikude
Ndiyathemba ukuba ubenombulelo omnandi nozolileyo nosapho lwakho. I-celebs yaseHollywood ayihlukanga lee kunawe malunga noku. Umbulelo uhlala usisihlandlo esihle sokufumana abahlobo okanye usapho. Kungenxa yoko le nto sinoMhlobo wobuhlobo wale mihla. Ngeenkwenkwezi ezinjengoJennifer Aniston kunye noCourtney Cox abafuna iiholide.
phakathi kwexesha le-3 lonyaka wokuqala
Abanye abanjengoKaley Cuoco bathunyelwa kwiitropiki. Inkwenkwezi enye ngokuqinisekileyo eyayingenaso isidlo sombulelo yayingu-Taylor Swift. Imvumi yabanjwa kwikhamera eLondon kutsha nje. Kodwa i-Instagram ibonisa umkhondo weefoto zokwabelana kwakhe ngobusuku obunombulelo kunye nabahlobo bakhe abaninzi ngaphambi kokuwela iAtlantic.
Ngabaphi abahlobo ababekhona kunye no-Taylor Swift?
Umhlobo wexesha elide noTaylor Swift, uGigi Hadid 'Ibali lakutshanje le-Instagram liye lafumana amawaka emiboniso. Emfanekisweni, abalandeli banokubona uSwift ebuza kunye nabahlobo bakhe kunye nokusela iwayini. Abathandi bakhawuleze ukwalatha uMartha Hunt, uAntoni Porowski, kunye nabanye ababonakale emfanekisweni.
Iphakamise imeko entle yomthendeleko. Abathandi bemvumi banokubona uburharha obufihlakeleyo kwi-Swift ebuza iwayini ngesandla. Kwangoko kulo nyaka, i-Twitter iqhume i- #, DrunkTaylor. Ngomtya wevidiyo weemvumi ezihamba ngamantongomane emva kokusela ii-mojitos ezimbini ezinesiqingatha ngokwamkelwa kwakhe.
UMartha Hunt naye akazange ashiyeke kude kwimibhiyozo. Uphinde wathumela enye yeefoto zikaHadid phambi kwemoto ye-Swift kwaye wongeza, Uthando kunye nokuphoswa kakade. Le yindlela entle yokuba abathathu babonise ubuhlobo kunye nokuncoma omnye nomnye. Umhlobo wobuhlobo waba yinto ephambili yexesha likaTaylor Swift, apho unokufumana khona uninzi lwabahlobo bakhe abasenyongweni kunye nezinye iiselb ezidolophini.
Kutheni uTaylor Swift eLondon?
Akukho ndawo yokuqikelela ukuba kutheni wayeseLondon. Imvumi ephumelele iGrammy (izihlandlo ezithathu, khumbula) ibikulwalamano lobudlelwane noJoe Alwyn kule minyaka imbalwa idlulileyo. Ngokwendalo, wakhetha ukwabelana ngeentsikelelo zonyaka kunye nesoka lakhe eLondon.
bhanyabhanya matt damon
Abakho baninzi ababesazi malunga nokuhlangana kwakhe ngaphandle komlingane wakhe osondeleyo. Akazange abanjwe kwikhamera ade afike e-UK. Oko kunokuba kungenxa yokukhetha kwakhe ukubhabha aye kwilizwe elikwinqwelomoya yabucala evela kwibala elizimeleyo labucala.
Imvumi ayisikelelanga kakhulu ngobudlelwane obukhulayo mandulo. Kwaye xa wadliwanondlebe noMgcini, wachaza malunga nokuphepha ukwenza ubomi bakhe babucala esidlangalaleni kwakhona. I-duo iye yaqonda malunga nolwalamano lwabo. Esi sizathu esinye; bambalwa abebesazi ngaye njengoko ehamba ngenqwelomoya eLondon ukuya kuchitha impelaveki noAlwyn.
UTaylor Swift wayevakalise umnqweno wakhe wokugcina ubomi bakhe bulawuleka. Kwaye oku kuyimfihlo kubangelwa yile nyani. Kodwa ngokuqinisekileyo, akatshintshanga kangako ekwabelaneni kunye nabahlobo bakhe okomzuzwana. Ngenye icwecwe elivela kwimvumi elilindelweyo kunyaka olandelayo, kufanele ukuba ibiyiholide yokuphumla kuye.
Ngolwazi oluthe kratya hlala uqhagamshele kwaye uhlale ukhuselekile.
Ukuphola iiAdventures zeSabrina yeXesha lesi-3 kuhlaziyo lwamva nje, iNew Cast, Sineendaba ezinomdla kuwe
Ixesha le-7 umtoli netflix
bhanyabhanya njengebhongo nekhethe
Amaphupha amnandi ekhitshini ixesha lesi-2 isiqendu 5
buya kubuya nini ubukumkani bokugqibela
Ixesha lejack ryan 3 ukukhutshwa komhla we-2020
Iqhawe lam lezemfundo amaqhawe ehlabathi imishini bhanyabhanya epheleleyo